२ दिन भित्रमा सोचेको काम बन्नेछ, पूरा पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत्र ०९, २०७७ समय: १८:५५:२३
ॐ लेखि सेयर गरौं!!! ॐ मात्र उ च्चा र ण गर्नु भयो भने पुरा ब्रमाण्ड्को दे बि देबताको श क्ति हुन्छ। त्यसैले देखेको 30 सेकेण्ड भित्रमा शे य र गर्नुहोस2दिन भित्रमा तपाइले न सो चे को का म बन्नेछ बिल्कुलै बे वस्ता नगर्नुहोला !!!अन्यथा अनिस्ट हुनेछ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐॐॐ साथै यो पेज माथी लाइक गर्नु न भु ल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ !
अ:न्य समाचार, हिले भाकल भनेको के हो भन्ने उत्तर तर्फ भा क ल भनेको हामीले कुनै पनि देवी देवता सँग गरिने भा का हो । एक किसिमले भनौ भने भाकल भनेको भा का नै हो । भाकल गर्ने व्यक्तिले केही पाउँ, कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दा राम्रो होस, बि रा मी हुँदा ठी क होस वा कसै सँग टाढा बसौं भनी आफ्नो ई च्छा अनी आफुले छ:नौट गरी त्यसो पुरा गरेमा म यो दिन्छु ।
यसो गर्छू वा कुनै कुराको बली दिन्छु अथवा भे टी पैसा नै चढाउँछु भनी कुनै मन्दीरमा या आफ्नो मन मनै गरिने भाका हो । भा क ल देवी देवतालाई गरीने अ:त्य न्तै म ह त्व पू र्ण बा चा हो र यो पुरा गर्नै पर्दछ । किनकी भा:कल गर्ने व्यक्तिले यसो गर्छु गर्दिन भनेर बा चा क स म खाएको हुन्छ । देवी देवतालाई गरिने भाकल भनेको एक ग’म्भी र कुरा हो भनी हाम्रो धर्म शास्त्रले ब ता ए को छ । धर्मशास्त्रमा भनिएको छ कुनै मानिस ले देवी देवताको नि म्ती भाकल गर्छ भने त्यो भा क ल कहिले पनि भं’ग गर्न हुदैन ।
जसको मन बाट जुन कुरा नि स्की ए को छ त्यो कुरा पुरा गर्नै पर्दछ । भाकल जुन समयमा बु झा उँ छु भनेको छ सो समयमा बुझाउनै पर्दछ नत्र देवी देवता त्यो व्यक्ति सँग प्रसन्न कहिले पनि हुँदैनन भन्ने हाम्रो धर्म शास्त्रमा उल्लेख छ । के भा क ल गरेपछी भा क ल बुझाउनै पर्दछ त ? हो यदी कसै ले कुनै कुरा मा गी भा क ल गर्दछ यसो गरी दिए यति समय मा यस्तो गर्छु भन्ने भा का गर्दछ भने त्यो अ:व श्य पुर्याउनु पर्दछ ।
यसको बै ज्ञा नी क का:रण यस्तो छ यदी कसैले भा क ल गरे अथवा कुनै कुरा गर्छु भनी भा का गर्दछ त्यो समयमा त्यसले आफुले बोलेको भा का पुरा गर्न सकेन भने उसको श रि र मा भएको आज्ञा च क्र ले काम नगरेको भन्ने बुझिन्छ अथवा उ कुनै पनि कुराको नि:र्णय लिन न सक्नेे मान्छे भन्ने बुझिन्छ ।
उसले कुनै पनि कुरामा अडिक रहन सक्दैन । त्यसैले आफुले बोलेको कुरा पुरा गर्न सक्ने मान्छे मात्र जिवनमा अ घि बढ्दछ । त्यसैले भा क ल (भाका) बोल्दै नबोलौ बो ले को कुरा पुरा गरौं, स:त्य मानिसको साथ सबैको आ शि र्वा द प्रा प्त गर्दछ र त्यस्ता मानिस सँग दे वी दे व ता पनि प्र श न्न हुन्छन् भन्ने हाम्रो मा:न्य ता छ ।
१४८३ पटक हेरिएको